Seattle Impound | Seattle Police Impound
Bakkeen/Iddoon konkolaataan itti argamuu fi kaffaltiin isaa, kan ammaa, lakkoofsa eeyyamaa/gabaatee bakee armaan gadii keessatti galchuun argamaa:
Depending upon your screen resolution you may need to scroll down to see more information.
Kaffaltiiwwan konkoolata too'anna jala holchuufi kuussudhaa barbachissan
Kaffaltiin too'anna jala hoolchuf barbaachisu $110.50 yoo ta'u, kuusuudhaafi isaan walqabatte wan jiruuf immo sa'aatii 12f (kudha lamaaf) qarshii $13.00 dhaa. Gatiin kun fe'isaafi arkiisu inddabalatu.
Odeeffannoo konkolaataa gadhiisuuf barbaachisu
Konkolaataan kan gadhiifamuu danda'u abbaa qabeenyaa galmaa'ee jiruun yookin firii isaa maqaa maatii (abba) tokko ta'e qabaniini. Kaffaltiiwwan kaffaluutti dabalatee konkolaataa kee gadhiisuuf ulaagaalen armaan gadii siibarbaachissu.
Mirkaneessa abbaa qabeenyaa ta’uu
Galmeessa yeroo ammaa, mata duree/maqaa, yookin waliigaltee liizii
Eeyyama lakkoofsa gabatee yookin lakkoofsa eenyummaa konkolaataa
Fakkii eenyummaa fudhatama qabu, kanneen akka eeyyama konkolaachisaa yookin waraqaa eenyummaa
Konkolaataa bakka itti dhaabbatee jiruu oofanii baasuuf konkolaachisaa eeyyama qabuutuu barbaachisa. Yoo kana taùu baate, konkolaaticha iddoo itti dhaabbatee ture irraa kaffaltiidhan harkifamee akka siif baù gochuuf haala mijeeffachuu dandeessa.
Yoo konkolaatichi harkifamee kan baù taè, kaffaltiiwwan ittiin fudhachuuf kaffaltu irratti dabalataan, ragaaleen konkolaataan yeroodhaaf ittiin dhaabbate barbaachisoo dha. Isaan kuni adda kan taànii fi kan kaffalamanis magaalaa Seattle dhaafi.
Abbaa konkolaatta malee nama biraaf akkaa gadhisiisu eyyaamuu
Yoo abbaa qabeenyaa galmaaèe jiru irraa barreeffama kanneen armaan gadii ofkeessaa qabu dhiyeeffatan, namni abbaa qabeenyaa taèe hin galmoofne tokko konkolaataa fudhachuu ni dandaà taà, yookin konkolaataa keessaa qabeenya fudhachuu dandaà taà:
Maqaa abbaa qabeenyaa aangoo qabu
Footoo kooppii waraqaa eenyummaa yookin eeyyama konkolaachisaa abbaa qabeenyaa galmaaèe.
Moodeelii fi bara konkolaataan itti omishame
Waliigaltee gara iddoo waa itti qabamee Aurora lakk. 206-363-6290 irratti faaksii godhi.
Haalota kaffaltii fudhatama qaban
Kaardii duubee (Debit Card)
Maastar kaardii (Master Card)
Ameerikaan Eksipiresii (American Express)
Konkolaataa kireeffame gadhiisiisuuf, waliigaltee kireeffannaa fi kaardii eenyummaa yookin eeyyama konkolaachisaa waliigaltee irra jiru dhiyeessuun barbaarchisaadha.
Konkolaattota seeraan qabamanii
Yoo konkolaataan yakka irratti hirmaatee jiraate yookin qorannoo biraatif kan barbaadamu taèe argame, qorannoon isaa dirqama dippaartimentii poolisii Seattle dhaan qulqullaaùu qaba.
Konkolaataan konkolaachisaan isaa dhiibbaa (qooricha samuu nama adochuu fudhatan) jala taè qabamee, dirqama yeroo sa’àatii 12 ta’èef to’ànnaa jala turuu qabaa.
Yoo Konkolaataan goomaan isaa hidhaamee (Boot) to’aana jala hole, lakk. 1-877-590-3757 irratti bilbiluun Paylock waliin qunnamuun barbaachisadha.
Yoo Konkolaataan seeraa caabsuun (Scofflaw) to’aana jala hole, lakk. 1-800-456-8838 bilbiluun Alliance One waliin qunnamuun barbaachisadhaa.
Bakkeewwan konkolaatton to'anna jala holan itti argaman:
3919 Pasadena Place NE Seattle, WA 98103
12220 Aurora Ave N Seattle, WA 98133
10140 W Marginal Place Tukwila, WA 98104
Kan ganu/Waliigaltee: Kaffaltiin konkolaataa gadhiisisuuf tarreeffamee tilmaama qofa kan taà'efii akka eeruutti/jalqabaati qofa kan fudhatamanii dha. Kaffaltiin dabalataa jiraachuu ni dandaà. Kaffaltiin inni sirrii/dhuuma kan murteeffamu iddoo konkolaataan ittito'anaa jala hole jiruutti. Ati tajaajila kana fayyadamuu irratti, waliigaltee nama ganee irratti waliigaltee jirta. Yoo konkolaataa kee argachuu batee fi ulaagaalee ittiin gadhiifamu ibsuu hin dandeenye ta'ee lakk. 206-364-2000 irratti bilbili maaloo!
© 2015 Seattle Impound